Tsy ilay izy no ratsy fa ny fampiasana azy… | NewsMada
Tsy ilay izy no ratsy fa ny fampiasana azy…
Tambajotran-tserasera tsy hay ialana eto amintsika intsony ny « facebook ». Tsy mifidy taona, saranga, toerana… fa saika mikirakira avokoa ny rehetra, indrindra taorian’ny fidiran’ny finday avo lenta eto Madagasikara. Fitaovan-tserasera anisan’ny haingana indrindra ankoatra ny antso an-telefaona izy ity. Manala fahasahiranana izay mahay mampiasa azy ary manavotra ain’olona maro ihany koa amin’ireo torohevitra isan-karazany any anaty vondrona misy azy any.
Zary ampiasain’ny sasany hamotehana fiainan’olona anefa ilay izy, tato ho ato. Tsy vitsy ireo efa nitondra faisana, afa-baraka noho ny fanaparitahana vaovao tsy voamarina ao anatiny. Potika ny hoavin’ny sasany noho ilay fampielezana vaovao iniana atao, tsy misy fanadihadiana. Anisan’ny niteraka resabe tao, ohatra, ilay tovolahy nolazaina fa nampijaly ny renin-janany ka niafara tamin’ny famoizany ny ainy. Rehefa nipoitra ny fanazavana, toa mifanohitra amin’izay niparitaka tao amin’ny “facebook” ny zava-misy.
Tsy izy ihany fa teo koa ilay hoe fanafihana teny Itaosy, nanakianan’ny maro ny polisy fa tsy matihanina amin’ny asany, jiolahy efa anaty vovo mbola votsotra ihany. Tsy izay anefa ny tena marina fa zavatra hafa mihitsy. Voasoketa ho tsy mahay ny asany izy ireo. Izao indray, vaovao niely tamin’ity tambajotran-tserasera no niteraka korontana sy savorovoro tao Ambilobe, omaly. Niafara amin’ny fifanandrinan’ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mihitsy. Mbola azo lazaina ho tsaho ny vaovao tsy voamarina nefa maro ireo mandray izany ho tena izy. Manoloana izany, tsy ny facebook no ratsy fa ny fampiasan’ny sasany azy no miteraka olana ka mahatonga ny fitsarana ivelany hoe manimba fiarahamonina. Samy manana ny fandraisany azy koa anefa ny tsirairay. Am-bava homana, am-po mieritra.